Coronavirus: Jawaabaha su'aalaha aad ka qabtaan Corono - BBC News Somali
Image caption Corona ayaa ku fiday in ka badan 145 dal
Faafitaanka fayraska Corona wuxuu saameeyay dalal badan oo adduunka ka mid ah, dadkuna waxay isweydiinayaan su'aalo muhiim ah sida: Ilaa heerkee ayaa la kala qaadaa cudurka? Sideen uga difaaci karnaa nafteena, sideese cudurka u faafaa?
Waxaan waydiinay dhagaystayaasha BBC-da ee daafaha adduunka waxa ay rabaan inay ogaadaan. Halkan ka akhriso su'aalo xul iyo jawaabahooda:
Maaskarada wajigu ma waxtar bay ii leedahay?
Waxaa jira caddaymo aad u yar oo muujinaya xirashada maaskarada in ay waxtar leedahay. Khubarada waxay qabaan nadaafadda wanaagsan sida inaad si joogto ah gacmahaaga u dhaqdo iyo in aad gacmaha ku taabanin agagaarka afka - aad ayey u waxtar badan tahay.
Caabuqa Corona malagu kala qaadi karaa taabashada handaraabka albaabka iyo muddo intee la'eg ayuu ku noolaan karaa?
Haddii qof qaba fayraska uu ku qufaco gacantiisa kadibna uu taabto sheey, oogada sheeygaasa waxa ay noqonaysaa mid uu ku hara gudbiyaha fayraska
Gacanka albaabka waa tusaale wanaagsan oo ku saabsan halista ka dhalankarta dhammaan oogo kasta ama dusha sheey kasta.
Khubarada waxay qabaan in Corona uu ku noolaan karo dusha sare ee sheey kasta muddo maalmo ah.
Markaa waxa ugu fiican waa in aad gacmahaaga u dhaqdid si joogto ah si aad u yareyso halista caabuqa iyo faafitaankiisa.
Kenya oo ka ducaysaneysa fayraska Corona
Image caption Dad badn aya abillaabay inay wajiga ku xirtaan maaskarda
Corona mala isugu gudbin karaa galmada?
Waa maxay kala duwanaanshaha u dhexeeyafayraska Corona iyo hargabka?
Corona iyo hargabku waxay wadaagaan astaamo badan, taas oo adkaynaysa in la ogaado waxa qofka haya iyada oo aanan baaritaan la samaynin.
Astaamaha ugu weyn ee lagu garto Corona waa qandho iyo qufac. Hargabku badanaa wuxuu leeyahay astaamo kale sida cuno xanuun, halka dadka qaba Caabuqa Corona ay dareemi karaan in ay neefsashada dhibto.
Image caption Goobaha qaar waxaa la kordhiyay inta jeer ee la nadiifin jiray
Miyuu cudurka Corona ka faafid badan yahay hargabka?
Weli waa xilli hore in la sameeyo isbarbardhig toos ah laakiin waxaan ognahay in labaduba ay yihiin kuwa aad loo kala qaado. Celcelis ahaan, dadka qaba caabuqa Corona waxay qaadsiiyaan labo ilaa saddex qof oo kale, halka kuwa hargabka qaba ay qaadsiiyaan ilaa hal qof oo kale. Si kastaba ha noqotee, dadka qaba hargabka waxay u muuqdaan inay si dhaqso leh ugu faafiyaan dadka kale, sidaa darteed labada caabuqa ayaa si sahlan u faafa
Maka qaadi kartaa fayraska cuntada uu diyaariyo qof cudurka qaba?
Qof qaba Corona wuxuu awood u yeelan karaa inuu u gudbiyo qof kale haddii cuntada ay diyaarsadaan aanan loo maamulin si waafaqsan hab-dhaqanka wanaagsan ee nadaafadda iyo dhawrsoonaanta caafimaad.
Caabuqa Corona waxaa lagu faafin karaa dhibco candhuuf ah oo kaso baxay afka oo gaara gacmaha. Gacmahaaga oo aad maydho ka hor taabashada iyo cunidda cunnadu waa talo u fiican qofkasta, si loo joojiyo faafitaanka jeermiska.
Image caption baaritaan caafimaad oo kali ah ayaa lagu xaqiijin karaa inuu qofku qaba Covid19 iyo in kale
Suuragal ma tahay in la tallaalo si looga hortago cudurkaan neef-mareenada ku dhaca?
Waqtigan xaadirka ah, ma jiro tallaal dadka ka difaaci kara caabuqa Corona ee noocan ah laakiin cilmi-baarayaashu waxay raadinayaan inay mid soo saaraan. Caabuqan ayaa ah nooc cusub oo aan horay loogu arkin aadanaha, taas oo macnaheedu yahay in dhakhaariirta ay wali hayaan waxyaabo badan oo ay ka bartaan.
Cimilada iyo heerkulku ma saamaynayaan gudbinta caabuqa Corona?
Weli ma cadda in isbeddelada heerkulka uu saameyn ku leehay fiditaankiisa. Qaar ka mid ah caabuqyada kale, sida hargabka , waxay raacayaan xilliyada qaar, oo ku soo hagaaga bilaha qabow. Waxaa jira xoogaa cilmi-baaris ah oo tilmaamaya in cudurka neefmareenada ku dhaca ee Bariga Dhexe (Mers) - caabuq kale oo kaso jeeda isla bahda sida caabuqa Corona - uu saameeyo xaaladaha cimilada, isagoo waxyar ku badan bilaha kuleelka
Image caption Dalalka qaar dadka wxaa lagu wargeliyay inaysan tagin goobaha ay dadeynaha isugu yimaadaan sida mukhaaydaha
Dadka hore u qabay cudurka oof-wareenta ma isku arki doonaan astaamo fudud oo caabuqa Corona ah?
Caabuqa cusub ee Carona, xaalado kooban ayaa horseedi kara in uu isu rogo cudurka oof-wareenka.
Gaar ahaan dadka qaba xanuunada sambabaha . Laakiin maadaama ay tani tahay nooc cusub oo caabuqa Corona ah, qofna ma yeelan doono wax difaaca ah.
Sidaas darted haddii aad horey u qabtay xanuunada Sars ama oofwareen, taasi micnaheedu ma ahan in uusan kugu dhici karin xanuunka Carona.